Shiinaha Warshad Dabaq ah oo loo yaqaan 'ESD Vinyl Floor Floor' iyo alaab-qeybiyeyaal | Linsu
1. dabaqa vinylka ESD isku mid ah wuxuu leeyahay shaqo ka hortag ah oo joogto ah maxaa yeelay waxay isticmaashaa shabakad isdabajoog ah oo isdaba-joog ah oo lagu sameeyay iskudhafka walxaha balaastigga ah oo ay weheliso waxqabadka dabaqa vinyl-ka ee isku midka ah sida biyo-gelinta, ololka ololka, xirashada u adkaysta, nuugista codka, kiimikada iska caabinta iwm.
2. Dabaqa PVC-ga ee anti-static, oo la duubay, marka uu salka ku hayo ama uu ku xirmayo meel kasta oo ka hooseysa, wuxuu awood u siinayaa in qarashka korantada la baabi'iyo. Waxaa lagu gartaa iska caabin udhaxeysa 10 awood 2aad iyo 10 9aad awood ohm. Dabaqa PVC-ga ah ee ka hortagga anti-static wuxuu ka samaysan yahay cusbada polyvinyl chloride maaddaama jirka ugu weyn, caagleyda, xasiliyayaasha, buuxiyoyaasha, walxaha la isweydaarsado iyo wakiilada isku xidhka lagu sameeyo saamiga sayniska, polymerization iyo geedi socodka wax taaj oo kale ee heerkulbeegga ah, iyo isdhexgalka u dhexeeya walxaha PVC waxaa loo sameeyaa koronto joogto ah shabakad, oo leh shaqo joogto ah oo ka hortag ah. Dabaqa wuxuu u eg yahay marmar oo wuxuu leeyahay saameyn qurxin wanaagsan. Waxay ku habboon tahay isgaarsiinta, microelectronics, qolalka kombiyuutarka ee kombiyuutarka barnaamijka lagu xakameeyo ee warshadaha elektiroonigga ah, qolalka kumbuyuutarka, sagxadaha shabakadda, nadaafadda iyo meelaha kale ee qalabka saxda ah iyo qalabka ay ku shaqeeyaan. Qalabka tabinta waa qalab nano leh waxqabad deggan. Qalabka tabinta wuxuu si toos ah uga socdaa dusha sare ilaa dusha hoose. Qaab-dhismeedkani wuxuu go'aamiyaa joogitaanka waxqabadka anti-static; qalabka aasaasiga ahi waa shey adag oo adag oo PVC ah, oo leh astaamaha u adkaysiga xirashada, dib u dhaca ololka iyo siibid la’aanta ， La kulan shuruudaha isticmaalka meelaha kala duwan ee qulqulka badan ee dadweynaha, oo leh iska caabin wanaagsan oo cadaadis leh; Waa nooc cusub oo ah waxyaabaha lagu qurxiyo dabaqa iftiinka jirka oo aad caan u ah adduunka maanta, sidoo kale loo yaqaan "walxaha dabaqa iftiinka jirka". Faa'iidooyinka PVC alaabada dabaqa ah ee la duubay ee ka hortagga anti-static muuqaal qurux badan, waxay ku siin kartaa midabyo kala duwan dadka isticmaala inay doortaan; dabacsanaan, dareemid cag wanaagsan; xirto iska caabin, jiil yar oo jiil ah, caabbinta cadaadiska iyo holaca ololka; caabbinta daxalka, caabbinta aashitada daciifka ah, caabbinta alkali ee daciifka ah. Shayga waxaa lagu tijaabiyay waxqabadka anti-ma guurtada ka hor inta uusan ka tagin warshadda oo la kulma heerarka tayada.
2m * 20m oo duudduuban vinyl isku mid ah
6mm * 6mm lebenka vinylka oo isku mid ah
Wax soo saarka alaabooyinka wax lagu kala qaado ayaa la tijaabiyey ka hor iyo ka dib soo saarista, iyadoo la waafajinayo heerarka tayada.
Dareemida GB 8624-2012 fasalka Bl
Iska caabin Sibidh Din 51130 koox R9
Isuduwaha firfircoon ee isku dhaca EN 13893 fasalka DS
Akhlaaqda iska jooji
Guud ahaan dhumucdiis
Degganaansho cabbir leh
Midab ku xirnaanta
U adkaysiga wasakhaynta
Stain No 0
Iska caabin foorar
Iodine ka hortagga ah
23 shaqo culus
34 shaqo culus
43 shaqo culus
Hanti dheeraad ah
Kuleylka dhulka hoostiisa Diidmada Kiimikada
Dabaqa ka-hortagga ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa qolalka kombuyuutarka elektiroonigga ah, qolalka nadiifka ah, qolalka sarrifka fog, warshadaha wax soo saarka ee qalabka elektaroonigga ah, aqoon isweydaarsiyadaha warshadaha microelectronic, qolalka asepsis, qolalka dhexe ee kontoroolka, iyo aqoon isweydaarsiyo u baahan nadiifinta iyo caddaynta elektaroonigga ah. Hadda waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa bangiyada, xafiisyada boostada, jidadka tareenka, dawooyinka, iyo warshadaha microelectronic.
600000 mitir murabac oo kayd ah, 24000 mitir murabac oo wax soo saar maalinle ah.
Gogoshayada si taxaddar leh ayaa loo buuxiyaa, si loo hubiyo in alaabada si wanaagsan loo geeyo.
Dabaqa 'ESD Conductive' waa in lagu dhejiyaa dabaqyada hoose ee siman, siman oo aan lahayn dildilaaca, humibity haraaga waa inuu ka hooseeyaa 2.5% iyadoo lagu tijaabinayo CM Dumb test. Faylasha, xarkaha iyo goobta wax lagu rakibayo waa inay gaaraan heer kulka ugu yaraan 18 ugu yaraan 24 saac ka hor inta aan la rakibin.
Hore: Tianshan PCV vinylalkohol
Xiga: Ximalaya PVC isbitaalka gogosha vinylalkohol